Dib u dhac ku yimid Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sare | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhac ku yimid Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sare
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dib u dhigtay, Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sare sanadkaan kadib culeysyadii siyaasadeed ee jiray maalmihii la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ku cad War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, waxaa mudo hal todobaad ah dib loo dhigay xilliga la qaadayo Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sare, sanad dugsiyeedka 2020/2021.
“Wasaaradda Waxbarashada, waxay halkaan kula wadaagaysaa dhammaan bahda Waxbarashada gaar ahaan masuuliyiinta dalladaha, maamulayaasha dugsiyada, ardayda iyo waalidiinta in imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare uu ku yimid dib dhac kooban oo ah asbuuc”. Ayaan lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada.
Dib u dhacaan ayay Wasaaraddu sheegatay in ay sababeen, culeysyada soo kordhay maalmihii la soo dhaafay, taas oo saamaysay ardayda, waana Isbuuc loogu talala galay in ardaydu is diyaariyaan.
War-saxaafadeedka waxaaa lagu sheegay in imtixaanka sannad-dugsiyeedkan 2020/21 la qaadi doono 29ka May illaa 2da Juun, 2021. Waxaana ardayda lagu booriyay in waqtiga dheeriga ah ee la siiyay muraajacada maadooyinka xoogga saaraan.
Sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay, ayaa loo tix galiya inuu ahaa sanadkii ay dhaceen ardaydii ugu badneyd ee shahaadi ah, taas oo sababtay is faham waa dhex maray Wasaaradda Waxbarashada, Dalladaha, Maamulayaasha, Waaliddiinta iyo Ardayda.